Eyona mveliso ye-EPE yePuzzle yeMat kunye neFektri | Yilibao
Ukukhusela: I-EPE Puzzle Mat ithambile kwaye ayityibiliki, abantwana banokudlala kwaye bakhase ngokukhuselekileyo kuyo.
Yindlela elungileyo yokunyusa iimveliso zethu kunye nezisombululo kunye nokulungiswa. Umsebenzi wethu uhlala ukuseka iimveliso zobugcisa kunye nezisombululo kubathengi abanobuchule obugqwesileyo beMveliso eziSongekileyo zokudlala iiMidlalo zokuThengisa eziXabiso liXabiso elenziwe eFektri yase China, Samkela ngokupheleleyo abathengi abavela kwihlabathi liphela ukumisela ubudlelwane beenkampani ezikhuselekileyo nezincedayo, ukuba nekamva eliqaqambileyo ngokudibeneyo.
Ngokwenziwa kwezinto okuqhubekayo okuqhubekayo, siya kukunika izinto zexabiso kunye neenkonzo, kwaye senze igalelo kuphuhliso lweshishini leemat ekhaya nakwamanye amazwe. Bobabini abathengisi basekhaya nabangaphandle bamkelwe ngamandla ukuba bazimanye nathi ukuze sikhule kunye.
Izinto ze-EPE yinto entsha enobuhlobo yendalo kunye nokuqina okuphezulu kunye nokuxhathisa ukothuka.
Iyaguquguquka, iyakhanya, kwaye iyanyibilika. Inokufunxa kwaye isasaze ifuthe langaphandle ngokugoba ukufezekisa isiphumo sokubambisa.
Yoyisa iziphene ze-styrofoam eziqhelekileyo eziethe-ethe, (ngokuthethileyo) zikhubazekile kwaye ziphantsi ekubuyiseni.
Kwangelo xesha, i-EPE inothotho lweempawu ezisetyenziswayo njengokugcina ubushushu, ukunganyamezeli ukufuma, ukufudumeza ubushushu, ukuvala isandi, ukungqubana, ukungasebenzi nokuguga.
Lawula umgangatho ngeenkcukacha, bonisa amandla ngomgangatho ". Umbutho wethu uzamile ukumisela iqela labasebenzi elisebenza kakuhle nelizinzileyo kwaye uphonononge indlela efanelekileyo yokuyalela ixabiso kuLuhlu lwamaXabiso eTshayina. Umatshini, Inkqubo yethu ekhethekileyo ikususa ukusilela kwecandelo kwaye inikezela abathengi ngokungakhathali kumgangatho ophezulu, esivumela ukulawula iindleko, ukucwangcisa amandla kunye nokugcina ukuhambelana nexesha lokuhanjiswa.
Uluhlu lwamaxabiso aphantsi e-China Foam Play Mat amaxabiso, Iqela lethu lobuchwephesha lobuchwephesha liya kulungela ukukusebenzela ukubonisana kunye nengxelo. Siyakwazi kwakhona ukukunika ngeesampuli zasimahla ukuhlangabezana neemfuno zakho. Eyona mizamo ilungileyo iya kuthi iveliswe ukuze ikunikeze eyona nkonzo kunye nentengiso. Xa unomdla kwishishini lethu nakwizinto, qiniseka ukuba uthetha nathi ngokusithumela ii-imeyile okanye usitsalele umnxeba ngokukhawuleza. Kwimizamo yokwazi ukuthengisa kwethu kunye nenkampani eyongezelelweyo, unokuza kumzi-mveliso wethu ukuyijonga. Siya kwamkela ngokubanzi iindwendwe ezivela kwihlabathi liphela kwishishini lethu ukudala ubudlelwane beshishini nathi.
Egqithileyo Iphepha lodonga le3D
Okulandelayo: TPU asongwe Mat